လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်ကိုစတန့်ထွင်ပြီးမောင်းမိခဲ့လို့ ထောင်ဒဏ် 14လ ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေး - Mckzone Daily
လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေကို စတန့်ထွင်ပြီးမောင်းတာတို့ ၊ မီးပွိုင့်တွေကို ဖြတ်ပြီးမောင်းပြေးတာတို့ဟာ အလွန့်အလွန်ကို အန္တရာယ်များလွန်ပြီး အခြားယာဉ်မောင်းတွေကိုလည်း မကြာခဏထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ပဲ အချို့သောနိုင်ငံတွေက အဆိုပါလမ်းမကြီးပေါ်မှာ စတန့်ထွင်ပြီးမောင်းနှင်ကြတဲ့ ဆိုင်ကယ်သမားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူလိုက်တာဟာ အတော်လေးကို ကောင်းမွန်တယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲလေ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံက Adzrul Adzman အမည်ရှိတဲ့ အသက် 21နှစ်အရွယ်ကောင်လေးဟာ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ စတန့်ထွင်ပြီးဆိုင်ကယ်ကို အရှေ့ဘီးထောင်ပြီး မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ် 14 လ ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင် ဒဏ်ကြေးငွေ RM 5,000 (မြန်မာငွေ 18သိန်းကျော်) ပေးဆောင်ခဲ့ရပါတယ် ။
တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ Adzrul ဟာ သူ့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချပြီး အန္တရာယ်ကင်းဖို့ကိုပါ မတွေးခဲ့တဲ့အပြင် ၊ ဆိုင်ကယ်ကိုပြုပြင်ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ဆိုင်ကယ်အရှေ့ဘီထောင်ပြီး စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပြီး ပြစ်ဒဏ်ထင်ရှားလွန်းတဲ့အတွက် ယခုကဲ့သို့. အပြစ်ဒဏ်မျိုးချမှတ်လိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
ယခုကဲ့သို့ စတန့်ထွင်ပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးပိုပြီးထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် 5နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။ ယခုကဲ့သို့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဟာ လမ်းမပေါ်ရှိ ယာဉ်သွားယာဉ်လာများကို အန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အပြင် လိုက်လံတုပမည့်လူငယ်များလည်း မရှိတော့အောင် ဖြေရှင်းလိုက်သလိုပါပဲ ။
လမျးမကွီးပျေါမှာ ဆိုငျကယျတှကေို စတနျ့ထှငျပွီးမောငျးတာတို့ ၊ မီးပှိုငျ့တှကေို ဖွတျပွီးမောငျးပွေးတာတို့ဟာ အလှနျ့အလှနျကို အန်တရာယျမြားလှနျပွီး အခွားယာဉျမောငျးတှကေိုလညျး မကွာခဏထိခိုကျဒဏျရာရစပေါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ပဲ အခြို့သောနိုငျငံတှကေ အဆိုပါလမျးမကွီးပျေါမှာ စတနျ့ထှငျပွီးမောငျးနှငျကွတဲ့ ဆိုငျကယျသမားတှကေိုပွငျးပွငျးထနျထနျအရေးယူလိုကျတာဟာ အတျောလေးကို ကောငျးမှနျတယျလို့ ပွောရမှာပါပဲလေ ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး မလေးရှားနိုငျငံက Adzrul Adzman အမညျရှိတဲ့ အသကျ 21နှဈအရှယျကောငျလေးဟာ လမျးမကွီးပျေါမှာ စတနျ့ထှငျပွီးဆိုငျကယျကို အရှဘေီ့းထောငျပွီး မောငျးနှငျခဲ့တဲ့အတှကျ ထောငျဒဏျ 14 လ ခမြှတျခံခဲ့ရတဲ့အပွငျ ဒဏျကွေးငှေ RM 5,000 (မွနျမာငှေ 18သိနျးကြျော) ပေးဆောငျခဲ့ရပါတယျ ။
တာဝနျရှိသူတှရေဲ့ ပွောကွားခကျြအရ Adzrul ဟာ သူ့အတှကျလုံခွုံစိတျခပြွီး အန်တရာယျကငျးဖို့ကိုပါ မတှေးခဲ့တဲ့အပွငျ ၊ ဆိုငျကယျကိုပွုပွငျပွီးနောကျ ယခုကဲ့သို့ ဆိုငျကယျအရှဘေီ့ထောငျပွီး စမျးသပျမောငျးနှငျခဲ့တာဖွဈကွောငျး ဖွကွေားခဲ့ပွီး ပွဈဒဏျထငျရှားလှနျးတဲ့အတှကျ ယခုကဲ့သို့. အပွဈဒဏျမြိုးခမြှတျလိုကျရတာဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။
ယခုကဲ့သို့ စတနျ့ထှငျပွီးဆိုငျကယျမောငျးနှငျတဲ့ ပွဈဒဏျမြိုးပိုပွီးထငျရှားပါက ထောငျဒဏျ 5နှဈအထိခမြှတျခံရနိုငျကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။ ယခုကဲ့သိျု့ပွဈဒဏျခမြှတျလိုကျခွငျးဟာ လမျးမပျေါရှိ ယာဉျသှားယာဉျလာမြားကို အန်တရာယျကငျးစတေဲ့အပွငျ လိုကျလံတုပမညျ့လူငယျမြားလညျး မရှိတော့အောငျ ဖွရှေငျးလိုကျသလိုပါပဲ ။